Kutheni uEdson Glauber? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Ukubonakala kukaYesu, uMama wethu, kunye noSt.Joseph kuEdson Glauber, oneminyaka engamashumi amabini anesibini, kunye nomama wakhe, uMaria do Carmo, baqala ngo-1994. Ngo-2021, uEdson wasweleka ngenxa yesigulo esifutshane.
Ukubonakaliswa kwaziwa ngokuba yi-Itapiranga, ebizwa ngokuba yidolophu yabo yase-Amazon yaseBrazil. Intombi Enyulu uMariya yazichaza “njengoKumkanikazi weRosari neyoXolo,” kwaye imiyalezo yayihlala igxininisa ukuthandaza iRosari yonke imihla — ngakumbi irosari yosapho, ukucima umabonwakude, ukuya kuVuma, ukuNqula uMthendeleko, kunye nesiqinisekiso ukuba “iCawe yokwenene yiCawe yabapostile yamaRoma Katolika, nokuba“ isijeziso soqeqesho ”sisondele. UMama wethu wabonisa izulu, isihogo kunye nentlambululo-miphefumlo kuEdson, kunye noNyana wakhe, uYesu, banikezela ngeemfundiso ezahlukeneyo kwiintsapho kuMaria do Carmo.
Ngaphezu koko, iNenekazi lethu licele ngokuthe ngqo ukuhanjiselwa kobuKristu obujongwe ngendlela eyahlukileyo kulutsha, ukwakhiwa kwendawo elula yokuhamba, kunye neziko lekhitsana lesonka eIapapanga labantwana abasweleyo.
Utata kaEdson, owayenotywala obunobundlobongela obuguqulwe ngenxa yempembelelo yeapparitions, wafunyanwa, ethubeni, eguqa ngamadolo ethandaze ekuseni kakhulu eRosary kwigumbi lokuhlala losapho, kwaye uLwethu uLinomnikazi wathi isiqwenga somhlaba omkhulu Yayingabakhe nekaThixo. Ukumkanikazi weRosary wachukumisa ngesandla sakhe umjelo wamanzi ogeleza usuka kwindawo yeapparanga e-Itapiranga wacela ukuba amanzi lawo aziswe kubagulayo. Inani elikhulu lokuphiliswa okungummangaliso kuxeliwe, kuvavanyo oluqinisekileyo ngoogqirha, kwaye uninzi lwathunyelwa kwi-Apostolic Prefecture ye-Archdiocese yase-Itacoatiara. Inenekazi lethu likwacele ukuba kwakhiwe iculo, elisekhona nangoku.
Ngo-1997, imiyalezo ka-Itapiranga yaqala ukugxininisa ukuzinikela kweNtliziyo eNgcwele ka-Joseph, kwaye uYesu wacela ukuba uMhla woNyaka olandelayo ungeniswe kwiCawa:
NgoLwesithathu, nge-11 kaJuni ka-1997, usuku, lwalo Mthendeleko uceliweyo kuloo nyaka, uMama osikelelekileyo wathi oku kulandelayo, esenza ireferensi yoluhlu losapho olwaqhubeka eGhiaie de Bonate emantla e-Itali ngo-1940s- ii -apparations apho ukuzinikela kwiSt. Joseph kwakwandiswa khona:
U-Edson wayengazange weva nge-Ghiaie di Bonate okanye nayiphi na into evakalayo apho.
Njengoko kwenzekile kwezinye iiaparisari zaseMarian, ezinjengeFatima neMedjugorje, iNenekazi lethu labhengeza imfihlakalo ka-Edson malunga nolwazelelo lweCawa nolwehlabathi, kunye neziganeko ezimbi ezizayo zexesha elizayo. Okwangoku, kukho iimfihlakalo ezisithoba: ezine eziphathelele eBrazil, zimbini zehlabathi, zimbini zeCawe, enye yeyabo baqhubeka nobomi besono. Inenekazi lethu laxelela uEdson ukuba uzakushiya ebonakalayo kwiNtaba yoMnqamlezo ecaleni kwecawa ese-Itapiranga. Ukuvela phambi komnqamlezo kwintaba ecaleni kwecawa, uthe:
UDom Carillo Gritti, Bishop we-diocese yase-Itacoatiara, uphumeze isigaba se-1994-1998 se-apparitions ngokuthi "angaphezu kwawemvelo" okwaqala nge-31 kaMeyi ka-2009 kwaye ngokobuqu babeka ilitye lesiseko seSancwele entsha e-Itapiranga nge-2 kaMeyi ngo-2010. ku-Edson Glauber, okwiphepha elingaphezulu kwama-2000, ahambelana kakhulu neminye imithombo yesiprofetho ethembekileyo kwaye inomda oqinileyo we-eschatological. Ziyeyona nto iyintloko yezifundo ezininzi, kwaye okhokela ugqirha weDyunivesithi uMark Miravalle weYunivesithi yaseSteubenville wanikezela incwadi kubo, ebizwa Iintliziyo ezintathu: Ukusebenza kukaYesu, uMariya, noJosefu baseAmazon.
Ukusukela ukusweleka kukaDom Gritti ngo-2016, kuye kwabakho imbambano engekasonjululwa phakathi kwe-dayosisi yase-Itacoatiara kunye nomanyano olusekwe ngu-Edson Glauber nosapho lwakhe ukuxhasa ukwakhiwa kweSanhala. Umlawuli we-Diocesan waqhakamshelana neBandla ngemfundiso yoKholo wafumana ingxelo ngo-2017 ethi i-CDF ayithathi njengento eyongamileyo imvelaphi, isikhundla esihlala sigcinwe yi-Archdiocese yaseManaus. I-CDF, eyayiphantsi kakhadinali Gerhard Ludwig Müller ngelo xesha, ayikhankanyanga imboni yesibini, uMaria do uCarlo, nowathi ngokuhlangana wafumana imvume ngu-Bishop Gritti oswelekileyo.
Ngenxa yokuba iiapparitions zingasavunywa ngokusesikweni (kodwa zingagwetywa ngokusemthethweni), sinokubuza ngokusemthethweni ukuba kutheni sikhethe ukubonisa izinto ezifunyenwe nguEdson Glauber kule webhusayithi. Izenzo zomthetho ezenziwe yi-CDF kuphela isithintelo 1) Ukuphuhliswa ngokusemthethweni kwemiThetho yemiyalezo ka-Edson, 2) "ukusasazwa ngokubanzi" kwemiyalezo yakhe ngu-Edson ngokwakhe okanye 'uMbutho' wakhe e-Itapiranga, kunye no-3) ukukhuthaza imiyalezo ngaphakathi kwe-Prelature ye I-Itacoatiara. Sihlala kuthotyelo olupheleleyo kuyo yonke le miyalelo; kwaye, ukuba imiyalezo yakhe igwetyiwe ngokusemthethweni kwixa elizayo, siyakuba besusa kule webhusayithi.
Ngelixa kuyinyani ukuba uGqr Miravalle wayiyeka incwadi yakhe emva kokufunda uxwebhu lwe-CDF, kukwafuneka sazi ukuba iiwebhusayithi ezininzi kwihlabathi liphela ezinento yokwenza nesiprofetho ezaziwa ngokuthembeka kwimfundiso yeCawe, zigqibe ekubeni ziqhubeke nokupapasha iinguqulelo imiyalezo ye-Itapiranga. Oku mhlawumbi kuchazwa ngcono kukuba, ngexesha lokuphila kukaDom Carillo Gritti, iapparitions ze-Itapiranga zazinandipha isidanga esingaqhelekanga sokuvunywa kwaye uninzi lwabanikeli baphakamise imibuzo ngokubhekisele kwinkqubo yezenzo zoMlawuli weDiocesan. Ngapha koko, ukungxamiseka kwemxholo yemiyalezo kukuba ukumisela ukuhanjiswa kwale mpahla kude kube isisombululo se-Edson Glauber yecala (elinokuthatha iminyaka eliqela) libe sengozini yokuvala ilizwi lasezulwini ngexesha apho kufuneka kakhulu ukuliva.
Imiyalezo evela ku-Edson Glauber
... kodwa ukhuseleko luphakathi kwentliziyo engafakwanga.
Edson - Isaqhwithi esikhulu
Uninzi luya kuphulukana nokholo.
U-Edson-Musa ukuphelelwa lukholo!
Uyakuthanda ngothando olukhulu.
Edson-Intliziyo yam, intonga yombane
Kungekudala, iBandla eliNgcwele liza kwenzakala.
Edson-Khathalela Amakhaya Akho
Hlambululani amakhaya enu kuko konke ukungcola.
Edson - Ngaphandle kwabaPristi
... awunakuba nawo amandla okulwa.
Edson - Fumana ilangatye lentliziyo yam
Iintliziyo ezininzi ziyabanda elukholweni.
Edson - INenekazi lethu liyavela…
... ukuqokelela abantwana bakhe ngomthandazo.
Edson-Yintoni engenakwenzeka kuwe
... Unyana wam unika ngeRosari kunye noMthandazo kaYesu.
Edson -Umthandazo kuSt Michael
Yilwa nabo basilwayo.
Edson -IRosari yemihla ngemihla
Thandaza kwaye ukhawuleze. Thandaza kwaye ukhawuleze. Thandaza kwaye ukhawuleze.
Edson - Thembela kuThando lukaYesu
Isibetho esibulalayo siyeza kungekudala kwiCawa.
Edson Glauber - Thandaza ngokunyanisekileyo
Iintlungu kunye neentshutshiso ziya kufika kungekudala
U-Edson Glauber-Entliziyweni yoNyana wam, ngekhe woyike nantoni na
Nokuba yeyomnqamlezo, okanye yezilingo, okanye neentshutshiso eziza emhlabeni.
U-Edson Glauber -Ukuxhoma ngentambo
Umhlaba uya kugungqiswa kunanini na ngaphambili.
Amagama am athi apha aya kuzaliseka.
U-Edson Glauber-Iintlungu ziya kuthi zande kuwe
... ndikwenza ukuba ukhuphe iinyembezi ezikrakra ngenxa yokuhlala ungevayo kwilizwi lam.
U-Edson Glauber -Lungiselela ukungqubana kwehlabathi
Ukubandezeleka okukhulu njengokungazange kwenzeke ngaphambili.
U-Edson Glauber -Buyela eNkosini ngokukhawuleza
Iziganeko ezintle ziya kutshintsha ubomi bakho ngonaphakade.
Guqula iintliziyo zenu kwaye iNkosi iya kuba nemfesane kuye ngamnye kuni nakwiintsapho zenu.
Bonke ubukumkani besono buya kutshutshiswa ngokusesikweni.
U-Edson Glauber-Imizuzu emithathu ngasekhohlo kwi Clock kaThixo
... ukuze uluntu luguqulwe ngaphambi kweziganeko ezikhulu eziya kulugungqisa ngonaphakade.
Ixesha lokulingwa okukhulu lifikile.
Edson Glauber - iSt.Joseph iya kunceda
Ndikhalele uncedo lwam ngokuzithemba nangokholo.
U-Edson Glauber-Ukucocwa kweCawa
Ngenxa yezono, amahlazo kunye nokonakala.
U-Edson Glauber-Kwidabi lomlo we-Eucharistic
Baza kuthi ndiyindali.
Edson Glauber - Umbono weVatican
U-Edson Glauber-AmaXesha avuthiwe
Guqula, Guqula, Guqula!
U-Edson Glauber-Musa ukoyika ukutshutshiswa
UThixo uza kwenza ongakwaziyo.
U-Edson Glauber-Ikrele lomlilo liphakanyisiwe
Ubuntu bufikelele esiphelweni senzonzobila.
Edson Glauber - Thandazela abefundisi
Usathana uzihlasele kakubi.
U-Edson Glauber-Baninzi abaQeqeshiweyo
U-Thixo ubonakalisa inyani yemiphefumlo yabo phambi kwakhe.
← Kutheni Umphefumlo Ongalindelekanga?
ULuisa Picarretta-Kwizigwebo →
Ukukhubazeka Ngoloyiko January 23, 2022
Luz – Ngoku lixesha! January 22, 2022
Nikela Yonke into January 22, 2022
UPedro – Abantwana Bam Abangamahlwempu Bazakulamba January 21, 2022
UGisella - Intshutshiso iya kuba nkulu January 21, 2022
UValeria-Umhlaba wakho ube ngumhlaba kaSathana January 20, 2022
Umchasi-Kristu Uwexuko ubuKatolika isohlwayo Uqeqesho icawa kobuthixo ukuvuma kudideka ukuguqulwa ICoronavirus I-Covid-19 ukuphoxeka ukwahlukana Isahluko soxolo Umthendeleko ukholo Isikhanyiso seSazela Intliziyo Enganyanzelekanga UYesu lungisa Inimba uthando uMariya Umama bhubhane Ntshutshiso papa mthandazo ababingeleli isiprofetho zokuhlanjululwa yokufihla guquka irosari iisakramente zilingo Imbandezelo Ukuphumelela themba inyaniso lokugonya uloyiso Imfazwe isilumkiso
Kutheni Umphefumlo weCalifornian?
Ngo-1997, indoda nebhinqa eCarlifonia, ababehlala kunye ubomi besono, baba noguquko olunamandla ngeNceba kaThixo. Umfazi waye wakhutshelwa ngaphakathi ukuba aqale iqela yerosari emva kokufumana i-Divine Mercy novena yakhe yokuqala. Kwiinyanga ezisixhenxe emva koko, umfanekiso oqingqiweyo weNenekazi lethu leNhliziyo engaMiyo kwikhaya labo laqala ukulila ioyile kakhulu (kamva, eminye imifanekiso eqingqiweyo kunye nemifanekiso yaqala ukukhupha ioyile enevumba elimnandi ngelixa lokubethelelwa komfanekiso oqingqiweyo weSt Pio. ngoku elengiswe kwiZiko laseMarian elikwi-Divine Mercy Shrine eMassachusetts .. Ngenxa yokuba le mifanekiso iqalile ukutsala abantu abaninzi ekhayeni labo ekuqaleni, umlawuli wabo wokomoya wavuma ukuba bahlale bengaziwa). Lo mmangaliso ubakhokelele ukuba baguquke kwimeko yabo yokuphila kwaye bangene kumtshato wesakramente.
Malunga neminyaka emithandathu kamva, yaqala indoda ngokuzwakalayo ukuva ilizwi likaYesu (oko kubizwa ngokuba yi "locutions"). Wayengenayo ikatekisisi okanye ukuqonda inkolo yamaKatolika, ke ilizwi likaYesu lalothusa kwaye lamngenisa. Nangona amanye amazwi eNkosi ayelumkisa, walichaza ilizwi likaYesu lisoloko lihle kwaye lithambile. Uye wamndwendwelwa yi-St Pio kunye ne-St Thèrèse de Lisieux, iSt.Catherine yaseSiena, iSt. Emva kokuhambisa iminyaka emibini yemiyalezo kunye neemfihlo (ezaziwa kuphela yile ndoda kunye nokwaziswa kwixesha elizayo elaziwa yiNkosi kuphela) UYesu wathi kule ndoda, "Ndiyayeka ukuthetha kuwe ngoku, kodwa uMama wam uyakuqhubeka ekhokela."
Esi sibini saziva sibizelwe ukuba siqale indawo yokubhiyozela iMarian Movement yaBabingeleli apho bayokucamngca ngemiyalezo yeLady yethu ukuya	Fr. UStefano Gobbi . Kwakuyiminyaka emibini kula maqula kwakha kwenzeka la mazwi kaYesu: Inenekazi lethu laqala ukumkhokela, kodwa ngendlela ebalaseleyo. Ngexesha lokuhlanjwa kwemilambo, kwaye ngamanye amaxesha, le ndoda yayiya kubona "emoyeni" phambi kwakhe amanani emiyalezo evela kwinto ebizwa ngokuba "Ibhuku eliluhlaza,”Ingqokelela yezityhilelo ezanikwa uMama wethu	Fr. UStefano Gobbi , "KuBabingeleli boonyana Bethu abaziNtombazana."
Bobabini indoda nomfazi babandezeleka kakhulu ngenxa yobulungiseleli babo, kodwa bahlala beyinikela eNkosini ukusindiswa kwemiphefumlo. Kuyaphawuleka ukuba yenziwa yile ndoda hayi funda Ibhuku eliluhlaza okwesibhakabhaka Kude kube namhla (nanjengoko imfundo yakhe inqongophele kwaye enesiphene sokufunda). Kule minyaka idlulileyo, la manani avelayo aya kuqinisekisa ngezihlandlo ezininzi iincoko ezizenzekelayo kwi-cenacles, kwaye ngoku namhlanje, iziganeko ezenzeka kwihlabathi liphela. UFr. Imiyalezo kaGobbi ayizange isilele kodwa ngoku izalisekiswa ngexesha langempela.
Nanini na xa loo milayezo ifumaneka kwi-Countdown eBukumkanini, siya kuyenza ifumaneke apha.